Fepetra fampiasana | Kaonty
Izany fepetram-pampiasana dia mandaitra Oktobra 1, 2011.
By mampiasa www.Iroy.in (ny "Site"), tranonkala (anisan'izany ny, tsy misy fetra, izay mifandray tranonkala, sehatra fiadian-kevitra na ny bilaogy, mailaka sy ny RSS mamelona anao manaiky ho voafatotry ny manaraka Fepetra fampiasana (ny "Terms").
Ireo fepetram mifehy afa-tsy ny fitaovana nivoaka sy / na zaraina amin'ny Iroy.in (anisan'izany ny, fa tsy voafetra ho lahatsoratra, sary, fanoharana, loharano sy ny zavatra Laharana, sns) (ny "Content") mifandray amin'ny Site ary aza manarona hafa mifandray na hanovozan-kevitra tranonkala mifandray amin'ny Site, raha tsy manokana voalaza.
Iroy.in Reserves ny zo manova ireo teny ireo ombieny ombieny tsy misy fampilazana, noho ny antony tokana ao Iroy.in ny fisainana mazava. Iroy.in Mety hamoaka na Asehoy ny manamarika ny fiovana ara-nofo eo amin'ny Iroy.in Sites sy / na mety handefa mailaka anao momba ireo fanovana.
Katsaram-panahy hamerina ireo teny ireo ombieny ombieny mba ho apprised ny fanovana. Amin'ny alalan'ny fampiasana ny Iroy.in Sites, azonao, Mahafantatra sy manaiky ianao fa hitoetra amin'ny alalan'ny ka ho voafatotry ny ireo fepetram.
Ny Content izay miseho eo amin'ny Iroy.in Sites dia natao ho an'ny manokana, NonCommercial fampiasana ihany. Fampiasana ara-barotra akory va ny Content 'ny Iroy.in Sites dia hentitra voarara, raha tsy misy voalaza ao amin'ity fepetram.
Mety azo adika, manova, torio, mamindra, mampifanaraka, mandray anjara amin'ny ny famindrana na ny fivarotana ny, miteraka, mamorona asa vaovao avy amin'ny, mizara, manao, miseho, na amin'ny fomba rehetra mitrandraka, misy ny Content amin'ny manontolo na ny ampahany, tsy nahazoana alalana an- tsoratra ny Iroy.in na ny tompon'ny zon'ny mpamorona ny zon'ny mpamorona fantatra amin'ny filazana ao amin'ny Content, afa-tsy raha tsy izany dia voalaza ao amin'ity fepetram.
Iroy.in Sites manaova ny contenu ampy ny Creative Commons Attribution-License, fa tsy ara-barotra amin'ny fandikana bola ny Site. Io fahazoan-dàlana mamela na iza na iza ny miteraka, remix, na raha tsy izany dia manova am-boalohany Iroy.in Sites 'Content raha mbola bola dia omena ny Site.
Anisan'izany, manokana, alalana:
Mba miteraka nalaina avy amin'ny Iroy.in Sites;
Mba miteraka sary na pejy ao amin'ny Iroy.in Sites;
Mba ahitana am-boalohany Iroy.in afa-po amin'ny zavatra ho an'ny sarimihetsika, TV, printy, -tserasera, sns
Ny Content dia voaaron'ny zon'ny mpamorona fampiharana an'i Nizeria sy ny lalàna iraisam-pirenena ny zon'ny mpamorona, ary nanana na fehezin'ny Iroy.in na ny antoko voalaza ho toy ny mpanome ny Content.
Syndication ny Content
Iroy.in manome anao voafetra, revocable, tsy afindra toerana, tsy assignable sy ny tsy fahazoan-dàlana manokana ny indray mampiasa ny Content foto-kevitra ho an'ny fepetram-fifanarahana ity.
Iroy.in Sites manaova ny Content azo Syndication na amin'ny alalan'ny tranonkala, finday sy / na amin'ny atao pirinty. Io fahazoan-dalana Content Syndication mamela na iza na iza mampiasa indray tany am-boalohany Iroy.in Sites 'Content ho saran'ny fahazoan-dalana, tsy manova ny Content, ary raha mbola bola dia omena ny Site.
Afa-tsy raha tsy izany dia voalaza ao amin'ity fepetram, aza hanala ny rohy ao anatiny ny Iroy.in Sites 'afa-po. Ny Site famantarana sy / na URL dia tokony hiseho eo amin'ny pejy tsirairay mampiseho ny Site Content. Aza manova ny endrika na ny marika ny lohateny vaventy, andinin-teny sy ny fanazavana omena ao amin'ny fahana RSS. Aza hanala ny "More From [Site anarana]"Rohy miverina any tany am-boalohany Site amin'ny faran'ny lahatsoratra tsirairay.
Ny Content Syndication fahazoan-dàlana dia tsy hanome anao na tompon'ny, na hafa liana amin'ny fananana ara-tsaina, misy Content, ary mety ho nahantona na faranana na inona na inona antony, in Iroy.in ny hany fisainana mazava, ary tsy misy filazana mialoha na ny madio.
Iroy.in nasain'i ny saran'ny fahazoan-dalana ho an'ny ara-barotra ny fampiasana ny Content alalan'ny tranonkala. finday sy / na amin'ny atao pirinty. Amin'ny alalan'ny sonia ny toy ny Content Syndication mpiara-miasa, no manaiky hitoetra amin'ny teny ity fizarana ny fifanarahana.
Mety hanome elektronika filazana mahaliana ho lasa Content Syndication mpiara-miasa ny zanaky ny Iroy.in Sites amin'ny emailing ask@iroy.in
Ianao koa dia manaiky handoa saram Iroy.in ny fahazoan-dàlana azo ampiharina nandritra ny fisian'ny ny syndicating Iroy.in Sites 'Content. Fahazoan-dalana rehetra mandray karama saram mialoha ary tsy averina. Iroy.in mazava fiandry ny manan-jò hanova ny fahazoan-dàlana saram na oviana na oviana, eo filazana ho anao.
RSS Feed na Content
Iroy.in Sites manome RSS ho isaky ny Iroy.in Site. Raha mampiasa manontolo na betsaka ny fahana rehetra, no mangataka fa tsy manova izany amin'ny fomba rehetra, anisan'izany ny manala ny amin'ny dokam-barotra sy hanaraka ny toro lalana manaraka:
Full ad-tohanan'ny Feeds dia natao ho an'ny tena manokana ihany no ampiasaina amin'ny mpamaky RSS.
Fa fampiasana fahana hafa rehetra, anisan'izany ny fandikana amin'ny tranonkala, ihany no tokony hampiasa ny Excerpt fahana, raha tsy izany raha tsy niombon-kevitra tamin'i Iroy.in.
Aza ampiana afa-po, anisan'izany misy dokam-barotra na ny dokam-barotra hafa afa-po, ny RSS Feeds.
Iroy.in dia manana zo hanohitra ny fanolorana ny RSS mamelona sy ny zo mitaky anao intsony ny fampiasana ny fahana RSS na oviana na oviana.
Iroy.in koa tahirin-jo hamarana ny fizarana ny RSS mamelona na hanova ny afa-po na ny fandrafetana ny RSS fahana na oviana na oviana tsy misy fampilazana ho anao.
Iroy.in dia tsy hanaiky andraikitra ny afa-po ny mpampiasa ny soso-kevitrao. Ianao no tompon'andraikitra fotsiny ny fifandraisana amin'ny Iroy.in Sites. Na izany aza, manaiky tsy manao na dia iray akory ny manaraka:
Aza hamoaka nandrahona, manorisory, manala baraka, na manala baraka ara-nofo.
Aza iniana manao diso na mamitaka fanambarana.
Aza manolotra ny mivarotra na mividy misy vokatra na asa fanompoana.
Aza hamoaka ara-nofo izay manitsakitsaka ny zon'ny mpamorona na ny zavatra hafa mahaliana fananana ara-tsaina.
Aza hamoaka vaovao izay fantatrao ho tsiambaratelo, na amin'ny mora, na raha tsy izany simba ny lalàna.
Mariho tsara fa indray mandeha ianao hamoaka ny fanehoan-kevitra ny rehetra Iroy.in Sites, dia ho lasa ampahany amin'ny resaka bahoaka. Tsy manala ny fanehoan-kevitra ny mpampiasa raha tsy heverintsika azy ireo ho eo amin'ny fanitsakitsahana ny Fepetra fampiasana.
Raha misy antoko fahatelo nitaraina fa ny fanehoan-kevitra mandika ny Fepetra fampiasana na ny zony, dia asao izy ireo mba hamaly ao amin'ny fanehoan-kevitra ny tenany.
Raha hanenjika ny fitarainana, dia hanao ezaka mba hifandray handanjalanja anao tamin 'ny alalan no nanome anay, mba mampitandrina anao ny toe-draharaha. Dia hiaro ny fifandraisana vaovao, fa mety ho voatery hampiakatra azy ho ara-dalàna ny dingana fampiharana.
Zavatra Party Websites Content
Iroy.in Sites ivelany dia mety ahitana rohy amin'ny antoko fahatelo-tranonkala. Iroy.in dia tsy tompon'andraikitra ny fahamarinan'ny, na azo antoka ny fisian'ny vaovao rehetra, entana, tahirin-kevitra, hevitra, torohevitra na fanambarana natao hita ao amin'ny antoko fahatelo-tranonkala.
Ireo mpitsidika ny Iroy.in Sites dia mihevitra tanteraka andraikitra sy mety eo amin'ny fampiasana na antoko fahatelo-tranonkala. Ireo mpitsidika dia tokony hitarika misy ahiahy momba izay external Link ny antoko fahatelo-tranonkala ny mpitantana na ny Webmaster.
Site ity dia mivoaka ambanin'ny licence Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License.